8 Anoshamisa Mega Zvivakwa MuChina | Kufamba Nhau
Zvipo uye zvibvumirano
8 Anoshamisa Mega Zvivakwa MuChina
Maria | | China, Chii chekuona
Mufananidzo | CNN.com
Iyo kuravira kwemega-zvivakwa muChina kunozivikanwa. Kwete chete nekuti inovabvumidza kuratidza simba reinjiniya yenyika, asiwo nekuti vanogadzira zvivakwa zvakakodzerwa nekushandurwa kuita nzvimbo dzevashanyi vakawanda senge iyo Eiffel Tower kana iyo San Francisco Bridge.
Iyo yazvino mega-kuvaka yakavhurwa munyika yeAsia izambuko rakakwidzwa kusvika 218 metres pamusoro pemupata uye 488 metres pakureba mudunhu reHebei. Yakavakwa nekambani yeBailu Group, mhemberero yekuratidzira iyi yakapindwa nevashanyi vanosvika zviuru zvitatu avo vakakwanisa kuzvionera vega zvakaita kufamba pazambuko riri pachena pakati pamawere maviri mukati meHongyagu Natural Park.
Nezviyero izvi, Hongyagu ndiro bhiriji rakareba kwazvo pasi rose, rinokwanisa kumira kusvika pamatanhatu ekudengenyeka kwenyika nemadutu emasimba 6 maererano neBeaufort scale. Zvino, ndeapi mamwe mabhiriji kana mega-kuvaka izvo China inokwanisa kuputsa zvinyorwa? Isu tinovawana pazasi.
1 Zhangjiajie Bridge
2 Qingdao Mvura Bridge
3 Guangzhou Pasi Pevhu Line
4 Baipanjiang Bridge
5 Liupanshui Railway Bridge
6 Aizhai Bridge
7 Karakorum, mugwagwa mukuru kwazvo
Kusvikira iyo Hongyagu Bridge yakavhurwa, yakarebesa pasirese yaive muZhangjiajie Nature Park, chivakwa chakareba mamita mazana mana nemakumi matatu uye mazana matatu kukwirira. Iyo iri muZhangjiajie Natural Park, mudunhu reHunan, iro rakazivikanwa kubvira 1992 seNyika Heritage Site. neUNESCO, iri imwe yevakashanyirwa kuChina.
Qingdao Mvura Bridge
Pamusoro peJiaozhou Bay, iyo Qingdao Bridge yakavakwa, iyo yakareba kupfuura mvura pasi pano. Kuvakwa kwaro kwakatora zvinyorwa kubva kune rimwe bhiriji reChinese, iro riri muHangzhou Bay iyo kusvika pari zvino yaionekwa seyakarebesa pasirese pamusoro pemvura yegungwa, iine makiromita makumi matatu nematanhatu pakureba.
Iyi mega-kuvaka ine kureba kwemakiromita makumi mana neshanu uye ine nzira nhanhatu dzinofamba nemigwagwa mumativi ese ari maviri. Iine mapyloni anopfuura zviuru mazana mashanu nemazana maviri uye kugadzirwa kwayo kwaida mamirioni ematani esimbi nekongiri.
Parizvino padyo neQingdao Bridge pachitsuwa chidiki chekuvaka chiri kuvakwa chinoshanda senzvimbo yekuzorora yevafambi, kuitira kuti vagone kuzadza mota dzavo, kuwana chikafu kana kuita zvekutenga.
Guangzhou Pasi Pevhu Line
Tunnel yakareba kwazvo pasi rose yekutakura vanhu iri muGuangzhou, rimwe remaguta makuru kumaodzanyemba kwenyika. Iyi mega-kuvaka inobvumidza kufamba makumi matanhatu emakiromita nepasi pevhu pasina kuenda kumusoro.
Iyo Beipanjiang Bridge haina kukodzera kune avo vane kutya nzvimbo dzakakwirira. Inowanikwa 565 metres pamusoro peNizhu rwizi canyon, kumaodzanyemba kwenyika, uye inobatanidza matunhu eYunnam neGuizhou mumaawa maviri. Kana pamazuva ekare paive nemaguta aive nemaawa mashanu kure nemotokari.
Mifananidzo iyo inogona kutorwa kubva kwakatenderedza Beipanjiang Bridge inoshamisa. Mhute iri pakati pemakomo inopararira nenyika yese sekunge yaida kuzadza zambuko rakazvarwa pakati pematombo.
Mufananidzo neRail Travel
Liupanshui Railway Bridge
Iri bhiriji rakabata zita repamusoro soro bhiriji repasi. Yakavhurwa muna 2001 uye iri muLiupanshui. Muna 2009 rakarasikirwa nemusoro waro webhiri repamusorosoro repasi rose asi richiri nekuchengetedza zvambotaurwa.
Kunyanya kutaurwa kunokodzera nzira yakateerwa kuvakwa kwayo, iyo yakatsanangurwa seyakanaka njere. Chikonzero ndechekuti pachinzvimbo chekushandisa shongwe mbiri dzechinguvana mune yega yega kuvaka arch, yakaitwa muzvikamu zviviri pamanyepo, imwe neimwe kudivi remupata. Murwi wekutanga kumucheto wega wega wakashanda setambo yetayi.
Kana mahafu emaberere apera, mirwi yakashandurwa kuita 180º kusvikira vatarisana nemaberere. Ipapo mahafu akaiswa pamwechete uye bhodhi pamwe nemamwe mapara akavakwa.
Icho chinoshamisa cheinjiniya yeguta muguta reJishou rakamiswa pamusoro peHunan Dehang canyon 355 metres pamusoro pevhu. Pamamita 1.176 kureba, inobatanidza magumo ematanera maviri anoumba mugwagwa weJishou-Chadong, wakavakwa pamusoro pemupata wakanaka.
Karakorum, mugwagwa mukuru kwazvo
Kupedza chinzvimbo kubva kumatenga isu tichataura nezveKarakorum, mugwagwa mukuru uye mega-kuvaka pamamita zviuru zvishanu zvakakwirira zvinobatanidza kumadokero kweChina nekuchamhembe kwePakistan. kuburikidza neimwe yenzvimbo dzinotyisa uye dzakakomberedza dzenyika sezvo ichifamba nemumakomo matatu makuru akadai seKarakorum renji, Pamir renji uye Himalaya.
Sechido chekuda kuziva, nzira yaitevedza mugwagwa weKarakorum yaive chikamu cheSirika Road munguva yakapfuura uye parizvino inoonekwa sechiratidzo chekushandira pamwe nehushamwari pakati penyika mbiri idzi.
Iwe unoda here bhuku gwara?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » China » 8 Anoshamisa Mega Zvivakwa MuChina
Ini ndoda kugamuchira zvinopihwa uye zvekufambisa zvekutengesa muemail yangu
Nzira yekusarudza yakanyanya kukodzera inishuwarenzi yekufamba?
Chii chaunofanira kushanyira muCzech Republic
Tora nhau muemail yako
Join Actualidad Viajes vakasununguka uye gamuchira nhau dzichangoburwa pamusoro pekushanya uye kufamba muemail yako.
Gamuchira zvinopihwa uye zvibvumirano